ဒေါက်ဂလပ် A4 Skyhawk FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
downloads ရယူရန္7837
Author: Jean-Pierre Langer
အဆိုပါမရိန်း A-4 Skyhawk တိုက်ခိုက်လေယာဉ်ပျံအင်ဂျင်အလင်းနဲ့ရိုးရိုးတပ်ဆင်ထားကြသည်။
တစ်ဦးတစ်ဦးက-4 အုပ်တစ်အုပ်၏မစ်ရှင်တိုက်ခိုက်ရန်ဖျက်ဆီးပစ်မှတ်, ရဟတ်ယာဉ်ခေါ်ထုတ်ရန်နှင့်အခြားနည်းဗျူဟာစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။
အစောပိုင်း 50s အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, A-4 Skyhawk မူလကတစ်ဦးအဖြစ် A-4D ပြဌာန်းခဲ့သည်
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် A-4 များစွာသောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။
A-4M နှင့် TA-4F လက်ရှိတွင်ရိန်း Reserve ၏အုပ်တစ်အုပ်အားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
အားလုံးမော်ဒယ်များနှစ်ခု 20mm သေနတ်များရှိသည်နှင့်သမားရိုးကျနှင့်နျူကလီးယားတိုက်ပွဲများနေ့ညဉ့်မပြတ်ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
A-4M တစ်ဦးဦးခေါင်း-up, display ကို (ထိုလေယာဉ်မှူးများ၏ visor မျက်နှာပြင်) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
အဆိုပါမရိန်း Reserve4လေယာဉ်တင်အသီးအသီးနှင့်အတူတစ်ဦးက-12s နှစ်ခုအုပ်တစ်အုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားနှစ်ဦးကို TA-4 ရှိပါတယ်
အရောင်များ: အာဂျင်တီးနားလေတပ် (မီးခိုးရောင်)
သမားရိုးကျ 2-D ကို panel က။ အဘယ်သူမျှမက virtual cockpit (VC ကို)
အများဆုံးမြန်နှုန်း: 440 KIAS
ဒီလေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အလွန်ခက်ခဲသည်အတိုင်း, takeoff များအတွက်တိစာရင်းညှိ။ ဆင်းသက်သတိပြုပါ! ဒါဟာခက်ခဲ pitching နေပါသည်! နည်းနည်းလေးခြားနားချက်ကတောင်ပံကိုယူလိုက်တယ်, တစ်စုံတစ်ဦးကထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲထွက်လာပါလျှင်သူတစ်ဦးပျံ Ace ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝလျှော့ချခတ်နှင့်အတူ 100 KIAS: ဆင်းသက်မြန်နှုန်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်သူ: McDonnell Douglas